Hiran State - News: Wararki ugu danbeyey iyo Hiiraan
Wararki ugu danbeyey iyo Hiiraan
Khamiis 10,Maarso 2011(HSOL)-Wal wal aan la dheyelsan karin ayaa soo food saaray kooxahii xooga ku heystay shacabka Hiiraan State. Inta badan ciidamadii Shabaab ayaa baneeyey magaalada Belet weyne kedib markii ay shacabka u iclaamiyeen iyagoo xitaa dadka guryaha ugu tagayey dagaal oo warkooda la dhageysan waayey.
Arinta ugu yaabka badan ayaa ah in dhalinyaradii Somaliyeed ee Shabaabka ka tirsaneyd kuwoodii reer Hiiraanka ahaa ka baxeen magaalada iyadoo aan la garaneyn halka ay qabteen inkasta oo uu muran weyni ka jiro argagixisada dhexdooda oo qaarne diideen in shacabka aan la dhibaateyn hadii ay dagaalka diideen iyagoo og natiijada ka soo baxi karta qof la qasbay dagaal uu galay guusha laga faa'idi karo.
Inta badan ciidamadii ku sugnaa magaalada Belet weyne ayaa niyada ka jabtay kedib markii Shabaabkii ku sugnaa magaalada Tiyeegloow oo ah xadka Hiiraan iyo Bakool ciidamo joogay hal mar iskaka baxeen kedib markii looga yeeray magaalada Beydhabo sidaasi daraadeed ciidamadii ku sugnaa magaalada Belet weyne ayaa ogaaday in xili walba dhabarjabin lagu sameyn karo walwalkuna halkaas ayuu ka yimid.
Xaqiiqadii ciidamada reer Hiiraan ee xaq u dirirka ah oo dhulkooda xoreysanayo iyo kuwa hada ku haray guud ahaa magaalooyinka waaweyn ee Hiiraan State iskuma dhigmaan waayo kooxahan markoodii hore waxey ku dagaalami jireen dagaal niyada ah oo koodii dhinta uu iska dhaadhiciyey inuu janada galayo laakinse hada arintaasi meesha wey ka baxday oo niyadi ma jirto xalka ugu danbeeyana waa in gerka iyo Shaarbaha la jaro oo shacabka leysku ekeysiiyo.
Jakooda rasmiga ah
Dagaalo is xig xigay oo maalmahani ka socday magaalada Mogdisho ayaa ku dhintay inta badan taliyayaashii dagaal galin jiray ciidanka Shabaab iyo Alqacidada Somaliya waxaa kale oo lagu dilay nin u dhashay dalkaasi Bangaladesh oo isagu ahaa ninkii xakumi jiray dhamaanba ciidanka ku sugan gobolada dhexe saldhigiisuna waxuu ahaa magalada Belet weyne ninkaasi waxuu u dhintay dhaawac ka soo gaaray magalada Mogdisho dhaawaciisana waxaa lagu dhameystiray isla magalada Belet weyne dhawrkii maalmood ee inadhaaftay.
Waxaa kale oo Shabaab looga dilay dagaaladii Mogdisho taliyahii ururkaasi u qaabilsanaa dhinaca kaartada oo saldhigiisu ahaan jiray magaalada Balcad oo ah magaalo muhiim u ah kooxahaan qaswadayaasha ah. Arin aan la hubin oo aan walito soo shaac bixina waxey sheegeysaa in dagaalka Shabab ay ka sii wado Somaliya ay ku kala aragti duwan yahiin hogaanka sare ee Shabaab iyo ajanibta iyaga xakuma ee Alqacida.
Qasaaraha mar hadii ay jabaan ay kala kulmi karaan kooxahaani Shacabka Somaliyeed?
Shacabku guushooda ugu weyn waa iney maqlaan in ay Shabaab jabeen kedibna ciidamda alqacida iyo Shabaab markey jabaan guryaha shacabka ayey gali doonaan kedibna Shacabka ayaa ka shaqeysanayo oo sidii xiligii maxkamadaha laguma qarin doono guryaha oo dhibaatatii ay shacabka u geysteen ayaa walita muuqata.
Dagaalka Mogdisho kaka furan ma jecla alqacidada Somaliya, laakin wey ku qasban yahiin iney galan waayo hadii ay Mogdisho ku jabaan wey og yahiin meel kale oo ay ku dhuuman karaan ineysan jirin.
Hal ku dhigyada shacabka Somaliyeed waa "waa jabeene jabiya" iyo wax la mid ah.
· admin on March 10 2011 12:09:21 · 0 Comments · 2071 Reads ·
14,569,311 unique visits